Fahfaahin: Qarax ka dhacay magaaladda Muqdisho
Warar Keydmedia Online | 29 November 2021
Muqdisho waxaa ka dhacay xalau howlgal ay fuliyeen Ciidanka NISA, kuwaasoo helay xog ku saabsan in Al-Shabaab weerar maleegayso.
Muxuu salka ku hayaa safarka Farmaajo ee Qatar?
Doha ayaa safartii sano ee Farmaajo saameyn xoog leh ku lahayd arrimaha siyaasadda dalka, iyadoo wakiil uga ahaa Fahad Yaasiin.
Xiisada u dhaxeysa Deni iyo PSF oo xooggeysatay
Ciidamo ka tirsanaa daraawiishta oo uu watay Madaxweyne dani, si ay ula dagaalamaan ciidamada PSF ayaa isku dhiibay Ciidamadii loo qorsheeyey in ay dirirta ku qaadaan, taasoo dhabar jab weyn ku noqotay Dani.
Muxuu yahay Balan-qaadka Rooble u sameeyay Musharixiinta?
Doorashadda ka dhacaysa Soomaaliya waxaa hareeyay musuq-maasuq iyo boob baahsan oo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ku sameynayaan kuraasta Baarlamaanka.
Halkee marayaa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya?
Dowladaha Soomaaliya Iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay, arrimo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo amniga, kadib kulan ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Maxaa kasoo baxay Kulankii Rooble iyo Mucaaradka?
Warar Keydmedia Online | 28 November 2021
Kulankan oo looga hadlayey mad madowga ka jira arrimaha doorashooyinka ayaa bilawday duhurnimadii maanta, isagoo ahaa mid albaabadu u xiran yihiin.
Barakacayaal soo gaaray Duleedka Muqdisho
Waxaa saacadihii ugu danbeeyey Duleedka Muqdisho soo gaaray, barakacayaal qeybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, uga soo barakacay abaarta baahsan ee xilligan ka jirta.
26.3°C clear sky
29 November 2021, 13:17
Qarax culus oo ka dhacay Muqdisho
25 November 2021, 07:41
Qarax culus oo goordhaw ka dhacay Muqdisho
Canada oo cambaareysay dilka Weriye Afrika
20 November 2021, 20:27
Qarax weyn oo ka dhacay Muqdisho
11 November 2021, 15:35
Qarax 2aad oo ka dhacay Muqdisho